Farshaxanka dariiqa: marka ay isha dalooliso gidaarka iyo derbiyada | Abuurista khadka tooska ah
Farshaxanka dariiqa: marka indha indhayntu gidaarada ka gudubto
Weli waan sii wadi karnaa inaan wareerno hal-abuurnimo iyo meelahaas la beddelay jasiirad farshaxan ka buuxo iyo tixgelinta rinjiyeynta; gaar ahaan waxyaabaha lagu xardho ama darbiyada ay ku badan yihiin magaalooyinka waaweyn. In kasta oo ay sidoo kale jiraan waxqabadyo dadka u keenaya midabka iyo khayaanada farshaxanka magaalooyinka.
Qeybtan farshaxanka ah waxaa ku arki kara oo keliya milkiilaha gurigaas ama sawirradaas oo ina tusaya tayada muuqaalka oo macno ahaan u gudbaya darbiyada. Tan iyo wixii markaa ka dambeeyay isha iyo ardaygeedu wuu awoodaa inuu dhex maro sidoo kale xad-dhaafkeenna si aan u qabsanno dareenkeenna markaan raadineyno weynaanta muralkaan.
Ma ahan muddo dheer waxaan ka gudubnay jidadka si aan ugu raaxeysanno mural taasi waxay muujineysaa kartida fanaaniinta qaarkood oo awood u leh inay jaangooyaan meelaha aan u furanayn dadweynaha. Hab aad u fiican oo qurux loogu daro geesaha badanaa soo mara midabbada cawl ama madow, inkasta oo markan ay caddaan tahay oo la wareegaya mural kaas oo lebenku u muuqdo inuu xukumo
Milicsiga loo adeegsaday qaybtan iyo sida saxda ah tan ishu waa daaweyn fiican inaad nolol weyn siiso muuqaalkaas oo ka tarjumaya adduun kugu hareeraysan. Waxaa sameeyay fanaanka Mydogsighs, waxay ku taalaa Little Eccleston, oo ku taal Lancashire.
Haddii ay dhacdo inaad nasiib u yeelatay inaad istaagto oo aad hesho halka ay si gaar ah u tahay. Inta aan ognahay, waa la arki karaa wadada marka aad marayso goobta, sidaas darteed ma xumaan doono haba yaraatee.
Waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah talaabooyinka lagu buuxiyo mural meesha muuqaalka ishaas ayaa daloolinaya darbiyada iyo darbiyada, sida farshaxannadu caadiyan u sameyso maalinteenna maanta ee adduunkan.
Ha seegin ballanta ka hor kuwan shuqullada fanaaniinta delphotorealism.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Farshaxanka dariiqa: marka indha indhayntu gidaarada ka gudubto
Nalalka neon ee firfircoon ee ku jira sawirradan waddooyinka Hong Kong iyo Tokyo
40 foomam CSS ah oo aan lagu waayi karin degel kasta